Ezona siphoni zibalaseleyo zokugcina i-aquarium yakho icocekile | Ngeentlanzi
Isiphon se-aquarium sesinye sezixhobo ezisisiseko ukuze sikwazi ukwenza ugcino lwe-aquarium yethu kwaye ke siyigcine icocekile kwaye iintlanzi zethu zonwabile kwaye zisempilweni. Nge-siphoner siya kuphelisa ukungcola okuqokelelekileyo emazantsi kwaye siya kukusebenzisa kwakhona ukuvuselela amanzi kwi-aquarium.
Kweli nqaku siza kuthetha ngento yintoni i-siphoner, yeentlobo ezahlukeneyo esinokuzifumana, indlela yokuphonononga i-aquarium Kwaye siza kukufundisa nendlela yokwenza eyakho i-siphon eyenziwe yasekhaya. Ukongeza, sikwacebisa ukuba ufunde elinye inqaku malunga yeyiphi amanzi oza kuyisebenzisa kwi-aquariums ukuba lixesha lokuqala lokurhwaphiliza.
1 Yintoni i-aquarium siphon
2 Yintoni ukusetyenziswa kwesiponing ye-aquarium?
3 Iindidi ze-siphoner ye-aquarium
3.3 Mamela nje ukungcola
4 Uyisebenzisa kanjani i-siphon kwi-aquarium
5 Uyiphonela njani i-aquarium etyaliweyo
6 Uyithenga phi i-aquarium siphon
Yintoni i-aquarium siphon
Ukucoca iiphuli zeBPS® ...
ISiphon Aquarium, Isicoci...
I-aquarium siphoner, ekwabizwa ngokuba yi-siphon, sisixhobo esiluncedo kakhulu esivumela ukuba sishiye emazantsi e-aquarium yethu njengejethi zegolide, kuba ifunxa ubumdaka obuthe baqokeleleka kwiitraws ezantsi.
Nangona zikho iintlobo ezahlukeneyo zokuphamba (njengoko siza kuxoxa kwicandelo elilandelayo), zonke zisebenza ngokufanayo, kuba bafana nohlobo lwesicoci esiginya amanzi, kunye nomdaka oqokelelweyo, ukuba ishiywe kwisitya esahlukileyo. Kuxhomekeke kudidi, amandla okutsala aqhutywa ngombane okanye ngesandla, umzekelo, enkosi kwisixhobo sokutsala esivumela amanzi amdaka ukuba awele kwisitya esahlukileyo kwaye ngenxa yesiphon ngenxa yomxhuzulane.
Yintoni ukusetyenziswa kwesiponing ye-aquarium?
Ewe, injongo yokuphonononga i-aquarium ayisiyiyo enye yicoce, susa intsalela yokutya kunye neentlanzi eziqokelela ezantsi kwe-aquarium. Nangona kunjalo, isaphulelo, isiphon ikwasivumela ukuba:
Thatha isithuba se tshintsha amanzi e-aquarium (endaweni engcolileyo ufake ecocekileyo)
Gwema amanzi aluhlaza (ngenxa ye-algae enokuthi izalwe kukungcola, ethi yona i-siphon inoxanduva lokususa)
Thintela iintlanzi zakho ekuguleni ngenxa yokuba namanzi amdaka kakhulu
Iindidi ze-siphoner ye-aquarium
Kukho Iindidi ezimbini eziphambili ze-siphoner ye-aquarium, yombane kunye nesandla, nangona ngaphakathi kwezi kukho ezinye ezinomdla kakhulu, ezinokuthi zilungelelaniswe neemfuno zakho.
Iiphon ezincinci zilungele ii-aquariums ezincinci. Nangona zikhona ezombane, ukuba zincinci nazo zihlala zilula kwaye ziqulathe uhlobo lwentsimbi okanye ityhubhu eqinileyo, apho kungena khona amanzi amdaka, ityhubhu ethambileyo kunye neqhina elingasemva okanye iqhosha ekufuneka sicinezele ukuze sikwazi ukufunxa amanzi.
I-NICREW 3 kwi-1 yeComputer Cleaner ...
Ngaphandle kwamathandabuzo eyona isebenzayo, zisebenza ngokufana neziphonela ezincinci (umlomo oqinileyo apho kungena khona amanzi, ityhubhu ethambileyo ahamba kuyo kunye neqhosha lokuncancisa, kunye nemoto encinci, kunjalo), kodwa umahluko wokuba banamandla ngakumbi. Ezinye zide zenziwe ngompu okanye zibandakanya iibhegi zohlobo lwe-vacuum zokugcina ukungcola. Into elungileyo malunga nezi siphon kukuba, nangona zibiza kakhulu kunezo zesikhokelo, ziyasivumela ukuba sifikelele kwezona ndawo zikude ze-aquarium ngaphandle komzamo.
Okokugqibela, ngaphakathi kweesiphons zombane uya kuzifumana Umbane ngokupheleleyo (Oko kukuthi, zixhunyiwe ngoku) okanye iibhetri.
Mamela nje ukungcola
Olunye uhlobo lwe-siphon ye-aquarium esinokuyifumana ezivenkileni yile umunca ukungcola kodwa hayi amanzi. Esi sixhobo silingana ngokufanayo nezinye, umahluko wokuba sinaso isihluzo esidlula kuwo ubumdaka ukusigcina engxoweni okanye etankini, kodwa amanzi, sele ecocekile kancinci, angeniswa kwakhona kwi-aquarium. Nangona kunjalo, le ayisiyondlela icetyiswayo ekuhambeni kwexesha, kuba ubabalo lwesiphon kukuba lusivumela ukuba sibulale iintaka ezimbini ngelitye elinye, sicoca ezantsi kwe-aquarium kwaye sitshintshe amanzi ngokulula.
Kukho amathuba amaninzi okwenza eyakho i-siphon eyenziwe yasekhaya, kodwa apha siza kukubonisa Ixabiso eliphantsi nelilula. Uya kudinga kuphela isiqwenga setyhubhu kunye nebhotile yeplastiki!
Kuqala, fumana izinto ezenza isiphon: isiqwenga setyhubhu ebonakalayo, ayityebanga kakhulu okanye iqine. Ungayifumana kwiivenkile ezikhethekileyo, njengakuyo nayiphi na ivenkile yezixhobo zokusebenza. Uya kudinga i- ibhotile encinci yamanzi okanye isoda (malunga ne-250 ml zilungile).
Sika ityhubhu ukulinganisa. Ayifanelanga ukuba inde kakhulu okanye imfutshane kakhulu. Ukulinganisa, sicebisa ukubeka ibhakethi (kulapho amanzi amdaka aya kuphela khona) kubude obusezantsi be-aquarium. Emva koko beka ityhubhu kwi-aquarium: inyathelo elifanelekileyo kukuba ungayifaka ngokuchasene nomgangatho we-aquarium kwaye uyisuse ukuze ifike kwibhakethi ngaphandle kwengxaki.
Sika ibhotile. Kuxhomekeka kubungakanani be-aquarium, ungayisika ephezulu okanye esezantsi (umzekelo, ukuya embindini ukuba yindawo enkulu enamanzi, okanye ngaphantsi kwelebheli ukuba yi-aquarium encinci).
Ukubamba ikepusi yebhotile uze uyihlabe ukwenzela ukuba ubeke ityhubhu yeplastiki kodwa uyibambe. Lelona nyathelo linzima ukulenza, kuba iplastikhi yekepusi yomelele kunezinye kwaye kunzima ukugqobhoza, ke lumka ungazenzakalisi.
Beka ityhubhu emngxunyeni kwikepusi kwaye uyisebenzise ukunxitywa ibhotile. Ilungile!
Ukuyenza isebenze, beka indawo yebhotile ye-siphon emazantsi e-aquarium. Susa onke amaqamza. Yilungiselele i-emele apho amanzi amdaka aya khona. Emva koko, munca isiphelo simahla setyhubhu de amandla omxhuzulane abangele ukuba amanzi awele kwibhakethi (ulumkele ukuginya amanzi amdaka, akaphilanga kwaphela, kwaye akathandeki).
Okokugqibela, sebenzisa nayiphi na i-siphon oyisebenzisayo, Lumka kakhulu ungasusi ngaphezulu kwe-30% yamanzi avela kwi-aquarium xa uyicoca, njengoko iintlanzi zakho zingagula.
Uyisebenzisa kanjani i-siphon kwi-aquarium
Ukusetyenziswa kwesiphon, enyanisweni, kulula, kodwa kufuneka silumke singasithwalisi uxanduva ngendawo esihlala kuyo iintlanzi zethu.
Okokuqala, lungisa izixhobo oza kuzifuna: i-siphoner kwaye, ukuba ngaba yimodeli eyifunayo, a ibhakethi okanye isitya. Oku kuya kufuneka kubekwe kubude obuphantsi kune-aquarium yomxhuzulane ukuze yenze umsebenzi wayo.
Qalisa ukucoca amazantsi ngononophelo olukhulu. Kungcono ukuqala apho ukungcola kuye kwaqokelelana khona. Kwakhona, kufuneka uzame ukungaliphakamisi igrabile emhlabeni okanye umbe nantoni na, okanye indawo yokuhlala intlanzi inokuchaphazeleka.
Kukwabalulekile ukuba, njengoko besitshilo, ungathathi amanzi angaphezulu kwebhili. Ubuninzi be-30%, kuba ipesenti ephezulu inokuchaphazela iintlanzi zakho. Nje ukuba ugqibile ukuphonononga, kuya kufuneka ubeke endaweni engcolileyo endaweni yamanzi amdaka, kodwa khumbula ukuba oku kufuneka kuphathwe ngokufanayo nashiyekileyo kwi-aquarium kwaye banobushushu obufanayo.
Okokugqibela, nangona iya kuxhomekeka kubungakanani be-aquarium yakho, inkqubo yokufunxa kufuneka yenziwe ngamanye amaxesha. Ubuncinci kube kanye ngenyanga, kwaye kube kanye ngeveki ukuba kukho imfuneko.
Uyiphonela njani i-aquarium etyaliweyo
Ukutyala ii-aquariums kufanele icandelo elahlukileyo ekusebenziseni i-aquarium siphon, ukusukela oko Zibuthathaka kakhulu. Ukuze ungathathi indawo yeentlanzi zakho ngaphambi kwakho, sicebisa oku kulandelayo:
Khetha ifayile ye- i-siphoner yombane, kodwa inamandla amancinci, kunye nomnyango omncinci. Ukuba akunjalo, unokutsala ngamandla kwaye umbe izityalo, esifuna ukuziphepha kuzo zonke iindleko.
Xa uqala ukufunxa, lumka kakhulu musa ukumba iingcambu okanye wenzakalise izityalo. Ukuba une-siphon ene-inlet encinci, njengoko besitshilo, uya kuba nakho ukulawula eli nyathelo ngcono.
Gxila ngakumbi kwiindawo apho ingqwabalala iqokelela khona kunye neentlanzi.
Ekugqibeleni, ezona zityalo ziethe-ethe ukuya kwisiphon zezo zigudle umhlaba. Yenze kakhulu, ngobumnene ukuze ungazigrumbi.
Uyithenga phi i-aquarium siphon
Kukho indawo ezininzi onokuthenga kuzo i-siphonerEwe, bahlala bekhethekile (ungalindelanga ukubafumana kwivenkile yakho yedolophu). Ezona zixhaphakileyo zezi:
AmazonUkumkani weevenkile, unazo zonke iimodeli esele zikho nezikhona. Nokuba zilula, zenziwa ngesandla, zisebenza ngombane, zisebenza ngebhetri, zinamandla angaphezulu okanye ngaphantsi… Kuyacetyiswa ukuba, ukongeza kwinkcazo yemveliso, jonga amagqabantshintshi ukuze ubone ukuba ingatshintshwa njani kwiimfuno zakho ngokusekwe amava abanye.
En iivenkile ezizodwa zezilwanyana zasekhayaNjengoKiwoko, uya kufumana iimodeli ezimbalwa. Nangona isenokungabi nantlukwano eninzi njengeAmazon kwaye ibize kakhulu kwezinye iimeko, into elungileyo ngezivenkile kukuba ungaya buqu uye kubuza ingcali kwiingcebiso, into eyacetyiswa ngakumbi xa usandula ukuqala ilizwe elinomdla leentlanzi.
Isiphon se-aquarium sisixhobo esisiseko sokucoca i-aquarium kunye nokwenza iintlanzi, ziphinde zibuye, zibe sempilweni kwaye zonwabe. Siyathemba ukuba sikuncedile ukuba uqonde ukuba isebenza njani kwaye yenza izinto zibe lula kuwe ukuba ukhethe isiphon esikufanela kakhulu kunye ne-aquarium yakho. Khawusixelele, ukhe wasisebenzisa esi sixhobo? Ingaba ihambe njani? Ngaba ucebisa imodeli ethile?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Izixhobo » I-siphoner ye-Aquarium